လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစစ်တမ်း (2019) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
comments: ဒီလေ့လာမှုမှာသုတေသီ "တဏှာ" မေးခွန်းသုံးပြီး ED နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ညွှန်းကိန်းများအကြား link တစ်ခုအဘို့အကြည့်ရှုကြ၏။ အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သော link ကို (သူတို့သုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားသည်အထိအသုံးပြုသူများကိုတိကျစွာ "တဏှာ" ၏၎င်းတို့၏ဘွဲ့အကဲဖြတ်ရန်ပါဘူးဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့) ဖွင့်လှည့်နေစဉ်, တခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ဆက်စပ်မှု၎င်းတို့၏ရလဒ်များကို၌ထငျရှား:
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏နှုန်းထားများညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲသူတို့အား [ယောက်ျား] သာ. နှစ်သက်ပူးပေါင်းလိင် (22.3%) ထဲမှာနိမ့်ဆုံးခဲ့ကြသည်များနှင့်ညစ်ညမ်းလိင် (78%) ပူးပေါင်းကျော်ပိုမိုနှစ်သက်အခါသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
…နေ့စဉ်နီးပါးသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောအသုံးပြုသော [ယောက်ျားများ] တွင်သာမန်“ ပုံမှန်” အသုံးပြုသူများ (week44x / week) အတွက် ၂၂% (၄၇/၂၁၃) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ED နှုန်းသည် ၄၄% (၁၂/၂၇) ရှိခဲ့ပြီးအရေးပါသည်။ univariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ် (p= 0.017) ။ ဒါဟာအသံအတိုးအကျယ်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိတစ်ကဏ္ဍမှပါမဖြစ်နိုင်သည်
PIED ၏အဆိုပြု pathophysiology ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပုံရသည်နှင့်သုတေသီများအမျိုးမျိုးအပေါ်အခြေခံသည်တစ်ဦးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဘက်လိုက်မှုအားဖြင့်လူတွေရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုခံရအံ့သောငှါသုတေသီများ၏သေးငယ်တဲ့အစုအဝေးအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်မဟုတ်။ ထို့အပြင်အငြင်းအခုံ၏ "causation" ဘေးထွက်ထောက်ပံ့အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပြတ်တောက်ပြီးနောက်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြန်ယောက်ျား၏အစီရင်ခံစာများဖြစ်ကြသည်။
သာအလားအလာလေ့လာမှုများနှင့်အဓိပ္ပါယ်မိုးသည်းထန်စွာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက် ED ကုသကကြားနေ၏အောင်မြင်မှုကိုအကဲဖြတ် Interventional လေ့လာမှုများအပါအဝင် causation သို့မဟုတ်အသင်းအဖွဲ့၏မေးခွန်းကို, ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
စစ်ရေးဆေးပညာ, usz079, https://doi.org/10.1093/milmed/usz079 Published: 24 ဧပြီလ 2019
ယောနသန် H ကို Berger, MC USN ယောဟနျသ E ကို Kehoe, MC USN အင်ဒရူး P ကို ​​Doan, MC USN Donald S ကို Crain, MC USN Warren P ကို ​​Klam, MC USN မိုက်ကယ် T ကမာရှယ်, MC USN မဿဲ S ကို Christman, CDR MC USN
ကျနော်တို့လူပျိုတို့နှင့်အမျိုးသမီးများ၏ညစ်ညမ်းအလေ့အထများကိုလေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့်ကိုဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်မကြာသေးမီအထက်သို့ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေးထားသောတစ်ဦးယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် pathophysiology နှင့်အတူကျနော်တို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပတျသကျမယ်လို့တွေးဆ။
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့ပါတယ်။ စစ်တမ်းများတစ် urology ဆေးခန်းမှတင်ပြ 20-40 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အားဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ ပြန်ကြားရေးဒေသစစ်တမ်းများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းအပေါ်စုဆောင်းခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်အမျိုးသမီးလိင်ရာထူးအမည်ညွှန်းကိန်းများတွင် Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF) နဲ့အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းဖို့အလားအလာစွဲ၏အတိုင်းအတာဟာညစ်ညမ်းတဏှာမေးခွန်းလွှာများနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးစိတ်အားထက်သန်မှုစကေးနှင့်အတူတိုင်းတာခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အခြေခံပြီးတိုင်းတာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှဆွေမျိုးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသားများအတွက်သိသိသာသာပိုပြီးမကြာခဏအမျိုးသမီးတွေထက်ညစ်ညမ်း (81.1% vs. 39%) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာနှင့်ဆယ်လူလာဖုန်းကိုပုံရိပ်မြင်ကွင်းနှစ်ခုလုံးကိုလေ့လာခြင်းအတွက်ရေပန်းအစားဆုံးပုံစံများဖြစ်ကြသည်။ ညစ်ညမ်းများအတွက် IIEF နှင့်တဏှာသည်, သို့မဟုတ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးစိတ်အားထက်သန်မှုအကြားမျှအသင်းအဖွဲ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူညစ်ညမ်းများအတွက် preference သိသိသာသာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (p = 0.001) နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏နှုန်းထားများညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲသူတို့အား သာ. နှစ်သက်ပူးပေါင်းလိင် (22.3%) ထဲမှာနိမ့်ဆုံးခဲ့ကြသည်များနှင့်ညစ်ညမ်းလိင် (78%) ပူးပေါင်းကျော်ပိုမိုနှစ်သက်အခါသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဆက်စပ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ variable တွေကိုနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်မရှိပါ။
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုလူငယ်များအကြားဘုံဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောဆက်ဆံရေးဟာကျားမဖြစ်စေများတွင်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှစွဲလမ်း၏အတိုင်းအတာများအကြားတည်ရှိ။ သို့သော်ပူးပေါင်းလိင်မှညစ်ညမ်းနှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိုက်တတ်တဲ့သူကိုယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခုသိသိသာသာတိုးမြှင့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုစိတ်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, စစ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်စေတနာအပေါ်အကြောင်းရင်းများနှင့်သက်ရောက်မှုများထပ်မံအကဲဖြတ်နှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါပေးထားမျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။